HALKAN KA DAAWO BARNAAMIJKII CBS 60 MINUTES EE MAXAABIISTA LA CIQAABAY
Waa askari Ingiriis ah oo Ku Kaadshaya maxbuus Ciraaqi ah: eeg: www.mirror.co.uk
Waxaa isa soo taraya shaleey iyo maanta wararka sheegaya sida naxariis darrada leh ee ka baxsan banii aadanimada ee ay ciidamada Mareekanka iyo Ingiriiska ula dhamqayaan maxaabiista reer Ciraaq ee ku xirxiran xabsiyada ku yaalla Baghdad, xarunta dalka Ciraaq.
Shalay oo sabti ahay taariikhduna ahayd 01-05.2004, wuxuu wargayska caanka ah ee The Mirror ee ka soo baxa dalka Britain si tifaftiran uga hadlay falal-denbiyeedka ay ciidamada Britain ula dhaqmaan maxaabiista muslimiinta ah ee reer Ciraaq.
Wargayska Mirror ayaa boggiisa hore maanta ku soo bandhigay maxbuus ciraaqi ah oo indhaha inta laga xiray dharkoo dhanna laga siibay uu askari ingiriis ah uu ku kaadinayo, wuxuuna warkan uu wargayska fidiyay kadib markay saacado keliya ka soo wareegeen barnaamij kale oo kan la mid ah uuna tebiyay taleefishinka mareekanka ee CBS [Akhri: CBS ama Daawo halkan]
Falalkan waxshinimo ee ay ku dhaqaaqeen ciidamada Britain ayaa sida uu wargayska sheegay si joogto ah loogula dhaqmaa guud ahaan maxaabiista ugu xirxiran xabsiyada ku yaala Ciraaq. Sawiradan oo ay ciidamada ingiriiska qaadeen ayaa ula jeeddada ay ka lahaayeen lagu sheegay jawaab la siinayo dagaalyahaniinta reer Ciraaq ee ka soo horjeeda ciidamada haysta guud ahaan dalka Ciraaq.
Sababta sidan Loogu Galay
Ciidamada Britain-ka waxay sheegeen, maxbuuska sawirkiisa la soo bandhigay ayaa loo maleenayaa in lagu soo eedeeyay xatooyo, sidaasna uu u mutaystay jirdil. Ma jiraan fal denbiyeed kale ama eedeyn kale, saacado kadib maxkamaddiisa, waxaa maxbuuskii ciraaqiga ah lagu kaxeeyay gaari ay ciidamada ingiriiska lahaayeen, dabadeedna gaariga oo socda ayaa laga tuuray, lama oga inuu maxbuuska maanta nool yahay ama inuu dhaawicii darnaa ee soo gaaray uu u dhintay.
Dhinaca kale, Janaraalka hoggaamiya ciidamada Ingiriiska ee jooga Ciraaq Michael Jackson ayaa wargayska u sheegay in ciidamadii gaysatay faldenbiyeedkaas baaristooda billaabatay, wuxuuna intaas raaciyay “hadday sugnaato inay ciidamadaas sameeyeen faldenbiyeedkaas ma noqonayaan kuwo mudan inay lebistaan direeska boqortooyada, magacii iyo maaqaamkii wanaagsanaa ee ciidamda ingiriiska ayay foolxumeeyeen” ayuu yiri Jackson.
Jawaabta ay UK ka bixisay
Barnaamij laga soo daayey TV-ga CBS ayaa muujiyey ciraaqiyiin la qaawiyey [Eeg halkan] Sido okale eeg SAWIRADA KALE...GUJI
Americans ‘Ashamed’ Of Iraqi Prisoners Abuse [IOL]
Dowladda Uk ayaa durbadiiba ka jawaab bixisay falal-denbiyeedka ay ku kaceen ciidamadooda. Af-hayeen u hadlay xafiiska Ra’iisal wasaaraha Britain iyo wasiirka gaashaandhiga ayaa si wadajir u wada eedeeyay falalkii ay ku kaceen ciidamada inmgiriiska ee ku sugan Ciraaq, waxayna ku nuuxnuuxsadeen inay baaritaan ku samayn doonaan dhacdada falalkaas, ayna yihiina kuwo aan marnaba la aqbali karin. [Eeg halkan]
Sawiradan uu wargayska maanta soo bandhigay ayaa yimid kadib markii maalintii shaleey ahayd uu taleefishinka laga leeyahay Mareekanka ee CBS uu mid ka mid ah barnaamijyadiisa aadka loo daawado ku soo bandhigay xad-gudubyada ciidamada mareekanka ay kula dhaqmaan maxaabiista reer Ciraaq.
Waxaa la is tusay askar mareekan ah oo farxad dartood la muusoonaya, tilmaamayana calaamadda ah inay guuleysteen, iyagoo markaasna ay sawiro ka qaadayaan maxaabiis ciraaqiyiin ah oo qaaqaawan. Maxaabiista dharka laga qaaday ayaa is dul-saarsaaran sida iyagoo aad mooddo inay ku dhaqaaqayaan dhexdooda falal anshax xun (isu tagayaan oo kale).
Madaxweynaha Mareekanka George W. Bush ayaa falalka ciidamada Mareekanka ku tilmaamay kuwo laga yaqyaqsado oo aan loo dulqaadan karin, wuxuuna intaa raaciyay in askartaas lala xisaabtami doono. [Eeg halkan]
Laga soo billaabo markii Ciidamada ay horkacayaan Mareekanka iyo Ingiriiska ay qabsadeen dalkaas Ciraaq waxaa jiray degganaansho la’aan iyo qulqulatooyin waaweyn, taasoo dhalisay joogitaanka ciidamada ajnabiga, waxayna dad badan oo reer Ciraaq ah ay aaminsan yihiin in Ciraaq ay waqtigan xaadirka ah ay aad uga liidato markuu talada dalka hayay madaxweynihii hore ee Ciraaq ee Saddaam Xuseen.
ISHA Sawirada: KA EEG HALKAN